Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Palpitation Q and A စိတ်လှုပ်ရှားရင် ရင်တွေ အရမ်းတုန်ပြီး
Palpitation Q and A စိတ်လှုပ်ရှားရင် ရင်တွေ အရမ်းတုန်ပြီး
22 Dec 10, 07:41
Q: နှလုံးနေရာက အနာပြည်တည်ရင်ကိုက်သလို တစစ်စစ်ကိုက်နေတာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ သိပါရစေ။ အသက်က ၂၈ ပါ။ ဘာမှ မစစ်ရသေးပါဘူး။ (့) မှာ အလုပ်လုပ်နေတာမို့ မြန်မာပြန်မှ စစ်ဖို့ပါ။ တခုခု စိတ်လှုပ်ရှားရင် ရင်တွေ အရမ်း တုန်ပြီး ကတုံကရင်နဲ့ နဲနဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဆို မောတယ်။
22 Dec 10, 12:47
Q: I also get disease like lae lae. Can you please answer for us?
A: အသက်ငယ်ရွယ်သူများ ကျား-မ မရွေး ရင်ပတ်နေရာမှာဖြစ်တာ အများအားဖြင့် စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။
• လူကြီးလဲဖြစ်၊ ဝလဲဝ၊ မဝရင်တောင်မှ (ကိုလက်စထော) များသူ၊ သွေးတိုးရှိသူတွေသာ ရင်ပတ်နေရာ ပြဿနာ ရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ဖြစ်တာကလဲ ရင်ညွန်ရိုး အောက်တည့်တည့်နေရာမှာ ပြုတ်တူနဲ့ အညှပ်ခံရသလို ဇောချွေးပြန်အောင်၊ အသက် ဆက်မရှူတော့နိုင်အောင် နာမှသာ အရေးတကြီးရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• မဟုတ်သူများ ရင်မှာ နာကျင်မှုဖြစ်တာ များသောအားဖြင့် ရင်ပတ်နံရံအကာမှာ တနည်းပြောရင် အပြင်မှာ လာဖြစ်တာ။ ကြွက်သား၊ အရွတ်မှာ တခုခုဖြစ်လို့ပါ။ သူ့အလိုလို ကောင်းပါတယ်။ အနာ-အကိုက် သက်သာဆေး တခုခုကို လိုတဲ့ အချိန်မှာသာ သောက်ဘို့လိုမယ်။ ဥပမာ Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenic
• စိတ်လှုတ်ရှားရင် ရင်တုံတာ လူတိုင်းတော့ ဖြစ်ကြတယ်။ သူများထက် ပိုရင်တော့ ဆက်မေး၊ ဆက်စစ်စရာတွေ ရှိတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ လက်ကောက်ဝတ် လက်မဖက်က သွေးလွှတ်ကြော ခုန်နှုန်း၊ တမိနစ်မှာ ပုံမှန်အနေမှာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ၇ဝ-၈ဝ က ကောင်းပါတယ်။ မမော-မပမ်း၊ ဒေါသ-ဝမ်းနည်းမရှိဘဲ၊ ဒိထက် များနေရင် မကောင်းပါ။
• ကျန်တာတွေ အကောင်းထားပြီး မောတုန်နေတာ သက်သက်ဖြစ်ရင် တကယ်လို့ နှလုံးခုန်တာလဲ မနှေးရင် Propranolol 20-25 mg တနေ့ ၁ ကြိမ် သောက်နိုင်တယ်။
• မောတာဆိုရင် တခုခုတော့ ရှိနေနိုင်တယ်။ မောတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ များလှတယ်။ မိန်းကလေး၊ အမျိုးသမီးတွေ ဆိုရင် သွေးအားနည်းနေ-မနေကြည့်ရမယ်။ ရာသီဆင်းတာ များ-မများ။ ယောက်ျားတွေဆိုရင် သွေးယိုတာ၊ ငှက်ဖျားဖြစ်ဘူတာ စသဖြင့် မေးမယ်။ အသားအရေ၊ လျှာ၊ မျက်ခွံ ဖြူဖွေးဖွေးနေသလား။
• သွေးအား နည်းနေရင် ရင်တုံတာ၊ မောတာ၊ အသက်ရှူမဝတာ ဆက်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ အမောမခံနိုင်ဘူး။ သွေးစစ်ရင် Hb (Hemoglobib) နည်းနေတာနဲ့ သိနိုင်တယ်။ နည်းရင် သံဓါတ်၊ ဖေါလစ်အက်စစ် ကြာကြာ သောက်ပါ။
• ရင်ခုန်များတာ-မြန်တာပါ ရောနေရင် နှလုံးနားထောင်ကြည့်ရမယ်။ ငယ်ငယ်က အာသီးရောင်၊ အဆစ်နာ ဖြစ်ဘူးလား မေးရမယ်။
• ယေဘုယျပြောရရင် ဆေးမစစ်ရသေးရင် အစာအာဟာရ မျှတအောင်စားပါ။ ဗီတာမင် Vitamin B Complex နဲ့ ဓါတ်ဆား Ferrous sulphate/Folic acid သောက်ပါ။ အအိပ်မပျက်စေနဲ့။
• နောက်တချက်က စိတ်၊ ဖိစီးမှု မများပါစေနဲ့။ အလုပ်မှာ နားနားနေနေလုပ်ပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိပါ။ လိုအပ်ရင် Diazepam5mg ညမှာ တခါတလေ သောက်ပါ။ စာဖတ်တာ၊ ပျော်စရာ-ရီစရာ၊ တရားထိုင်ပါ။